YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, June 05
ပုသိမ်ကြီးနား ဂြိုလ်သားတွေ့တယ်ဆိုလို့ ဘာများလဲလို့ ၊
Credit - Ko A Naw
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/05/2013 1 အကြံပြုခြင်း
အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများတွင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ အရှိန်နှင့်လှိမ့် ဝင်လာချိန်၌ တရုတ်-မြန်မာဆက်ဆံရေး အနည်းငယ် တင်းမာခဲ့သဖြင့် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တရုတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ သိသာစွာ ကျဆင်းလျက်ရှိကြောင်း The Wall Street Journal သတင်းတွင် ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် အကျိုးတူ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် စီစဉ်နေသည့် တရုတ် China Mobile နှင့် ဗြိတိန် Vodafone Group တို့ သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ခိုင်မာသော ဥပဒေမရှိဟူသည့် အကြောင်းပြချက်ဖြင့် လိုင်စင်လျှောက်ထား ရာမှ နုတ်ထွက်သွားခဲ့သည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/05/20130အကြံပြုခြင်း
နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပသည့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်သို့ ကိုယ်စားလှယ် ၉၀၀ ခန့် တက်ရောက်
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	| ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇွန်လ ၀၅ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၀၆ မိနစ်
အရှေ့အာရှ ကမ္ဘာ့စီးပွါးရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ (WEF) ကို နေပြည်တော်တွင် ယနေ့ စတင်ကျင်းပရာ ရာပေါင်းများ စွာသော ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များနှင့် စီးပွါးရေး လုပ်ငန်းရှင် ထိပ်သီးများ တက်ရောက်လျက် ရှိကြသည်။
နေပြည်တော်ရှိ MICC တွင် ပြုလုပ်ကျင်းပသည့် အရှေ့အာရှဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ် (WEF on East Asia) ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့က စတင်ပြုလုပ်နေရာ တက်ရောက်လာကြသော နိုင်ငံတကာ ကိုယ်စားလှယ်များအား တွေ့ရစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ - ဟိန်းထက်၊ မဇ္ဈိမ) သုံးရက်ကြာ ကျင်းပမည့် ဆွေးနွေးပွဲသို့ နိုင်ငံပေါင်း ၅၀ ကျော်မှာ ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း ၉၀၀ ခန့် တက်ရောက်ဆွေးနွေးကြသည်။
MICC တွင် သုံးရက်ကြာကျင်းပမည့် စီးပွါးရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲသို့ နိုင်ငံပေါင်း ၅၀ ကျော်မှ ကိုယ်စားလှယ် ၉၀၀ ခန့် တက်ရောက်ပြီး WEF ၏ လူဦးရေအများဆုံး တက်ရောက်သော အစည်းအဝေးဖြစ်ပြီး ထိုပမာဏကို ကြည့်ခြင်းဖြင့်
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အလွန်အမင်းစိတ်ဝင်စားမှုကို ပြသနေသည်ဟု WEF ၏ အာရှဒေသဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ ဆူရှန့်ပါလာကူသီရောင်း (Sushant Palakurthi Rao) အား ကိုးကား၍ AFP သတင်းတရပ်တွင် ရေးသားထား သည်။
လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်က သမ္မတဖြစ်လာခဲ့ပြီးနောက် ဦးသိန်းစိန်သည် ထူးခြားမြန်ဆန်လှသော စီးပွါးရေးနှင့် နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲများ ပြုလုပ်ပြီး ကမ္ဘာကို အံ့အားတသင့်ဖြစ်စေခဲ့ပြီး အနောက်နိုင်ငံများက ချမှတ်ထားသော ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုများကို ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းသွားစေခဲ့သည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များအဖို့လည်း မြန်မာနိုင်ငံသည် စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အလားအလာကောင်း များရှိသည့်နိုင်ငံအဖြစ် မျက်စိကျလာစေခဲ့သည်။
“အရေးပါတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်အများအပြားက သမ္မတနဲ့ တွေ့ဘို့ ကြိုးစားနေကြတယ်” ဟု အစိုးရ အရာရှိတဦးကပြောသည်။
ဈေးပေါသော လုပ်သားဈေးကွက် ရှိနေသည့်အပြင် သန်းပေါင်း ၆၀ မျှသော စားသုံးသူ အသစ်များ ရှိနေသည့်
ဈေးကွက်ကြီးက နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများအတွက် ဆွဲဆောင်မှုတရပ် ဖြစ်နေသည်။
ထိုအထဲတွင် ကိုကာကိုလာလည်း ပါဝင်ပြီး အင်္ဂါနေ့က ပုလင်းသွတ်စက်ရုံသစ်တခုကို မှော်ဘီမြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင် အင်္ဂလိပ်-ဒတ်ခ်ျကုမ္ပဏီဖြစ်သော ယူနီလီးဗား ကလည်း ပြည်တွင်းဈေးကွက် အတွက် ရေချိုးခန်းသုံးနှင့် အိမ်သာသုံးပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မည့် စက်ရုံတရုံကို ရန်ကုန်မြို့တွင် မကြာမီဖွင့်လှစ်သွားမည်ဟု ဆိုသည်။ ဇွန်လကုန်တွင် အဆိုပါစက်ရုံ၌ လုပ်သားအင်အား ၁၅၀ ခန့် ရောက်ရှိလုပ်ကိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ထားပြီး ယင်းတို့ အနက်အချို့မှာ ထိုင်းရှိစက်ရုံများမှ ပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိလာမည့် သူများ ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ကျွမ်းကျင်သူများ၏အပြောအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်မည့် စီးပွါးရေး လုပ်ငန်းများ အနေဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိသော ဥပဒေအဆောက်အအုံ၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံ ချို့တဲ့မလုံလောက်မှု၊ အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍနှစ်ရပ်စလုံးတွင် ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပါးနေသေးခြင်း စသော အခက်အခဲ အတားအဆီး များနှင့် ကြုံတွေ့ရလိမ့် ဦးမည်ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဝင်ရောက်လာမည့် စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် စိန်ခေါ်မှုအချို့ကို မီးမောင်းထိုးပြထားသည့်
ကြေငြာချက်တရပ်ကိုလည်း ယခုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွင် တွေ့ရှိရသည်။ နိုင်ငံခြား ဧည့်သည်များအတွက် ငွေထုတ် စက်များ မရှိသေး၊ ခရိဒစ်ကဒ်များအ သုံးပြု၍မရသေး၊ ဘလက်ဘယ်ရီနှင့် အခြား မိုဘိုင်းဖုန်း အသုံးပြုသူများ အတွက် 3G ကွန်ယက်မရသေး ဆိုသော အချက်များကို အဆိုပါကြေငြာချက်တွင် ထည့်သွင်း ရေးသားထားသည်။
ထိုသို့စိန်ခေါ်မှုများရှိနေလင့်ကစား မြန်မာအရာရှိများကတော့ အားတက်နေကြသည်။
“ဒါ ကျနော်တို့ပွဲပဲ။ ဒါ ကျနော်တို့ ကမ္ဘာကို လုပ်ပြလိုက်တာပဲ” ဟု ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား လုပ်ငန်းဝန်ကြီး ဦးဌေးအောင် အား ကိုးကား၍ AFP သတင်းက ရေးသားသည်။
ကျန်ရှိ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အားလုံးကို မကြာမီ လွှတ်ပေးပါမည်ဟု သမ္မတဦးသိန်းစိန် က ဖိုရမ် မကျင်းပမီ ယမန်နေ့က တိုင်းပြည်သို့ ရေဒီယိုမှ ကြေညာ ပြောကြားခဲ့သည်။
ထောင်တွင်းတွင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားပေါင်း ၂၀၀ ခန့် ကျန်သေးသည်ဟု နိုင်/ကျဉ်းအရေး ဆောင်ရွက်နေသူ များက ပြောသည်။
လက်ပံတောင်းတောင် အရေး ကို ဗြောင် စိန်ခေါ်လေပြီ ။
ကိုဝိုင် ဝိုင်ကေ's photo.
လက်ပံတောင်းတောင် သပိတ်စခန်းများ ညဘက် အိပ်နေကြချိန် အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲစဉ် သံဃာတော်များ မီးလောင်ဒဏ်ရာ (သေရာပါ) ရစေသော ကိစ္စ ကို မူ တရားဥပဒေနှင့် အညီ ၊ တရားဥပဒေကို လေးစား လိုက်နာသောအားဖြင့် တစ်မျိုး ၊ ဥပဒေနှင့် အညီ စစ်ဆေးစီရင်မှု ၊ အစရှိသဖြင့် လေသံ ( လုံးဝ ) မ ဟသော ...
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ ၏ ကြေငြာချက် ။
အကယ်၍ လာရောက်ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းခြင်းမပြုပဲ ဆက်လက်ရှောင်တိမ်း ခိုအောင်းနေပါက တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင် တည့်မှတ် မှန်ကန်စေရေးကို အလေးထားပြီး အင်အားသုံး၍ ကျေးရွာအတွင်း ဝင်ရောက် ရှာဖွေ ဖမ်းဆီးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ဖမ်းဆီးသည့်အခါ ပြန်လည်တုန့်ပြန် အန္တရာယ်ပြုခြင်း ၊ ဝရမ်းထုတ်ဆင့် တရားခံပြေး ကြေငြာထားသူအား အကာအကွယ်ပေးခြင်း ၊ ဖုံးကွယ်ပေးခြင်း ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်နိုင်အောင် ကူညီပေးခြင်းများ ရှိခဲ့ပါကလည်း ဥပဒေနှင့် အညီ ဆောင်ရွက် အရေးယူ သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
တရားဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာသောအားဖြင့် ဥပဒေနှင့်အညီ စစ်ဆေးစီရင်မှု ကို ဥပဒေနှင့် အညီ ရင်ဆိုင်ပါရန် အသိပေး သတိပေးသည် ။
ကိုမင်းကိုနိုင်ကို ချီးမြှင့်တဲ့ ဒီမိုကရေစီဆုပေးပွဲ အခမ်းအနား
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းလို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကို ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ ကိုကိုကြီးတို့ အပါအ၀င် မနေ့က အမေရိကန် ကွန်ဂရက် လွှတ်တော် အဆောက်အဦးမှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီအခမ်းအနားမှာ ၈၈ မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်ကို ကမ္ဘာတ၀န်း ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပံ့ပိုး ကူညီပေးနေတဲ့ NED အဖွဲ့ရဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီမိုကရေစီဆုကိုလည်း ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန် နိုင်ငံရေးမှာ သြဇာညောင်းတဲ့ အထင်ကရ လွှတ်တော်အမတ်တွေပါ တက်ရောက်ပါတယ်။ မနှစ်က ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုမင်းကိုနိုင် မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒီနှစ်မှာ သူ့ကို သီးသန့် အခမ်းအနားပြုလုပ်ပြီး ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုမင်းကိုနိုင်ကို ဒီမိုကရေစီဆု ပေးအပ်တဲ့ အခမ်းအနား မတိုင်ခင်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုမင်းကိုနိုင်အပြင်၊ သူနဲ့အတူ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ရောက်ရှိနေတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုကိုကြီးနဲ NED အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ကား ဂရက်ရ်ှမန်း (Carl Gershman)့  NED အဖွဲ့ရဲ့ အာရှနဲ့ ကမ္ဘာ့ရေးရာ လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ အကြီးတန်း ညွှန်ကြားရေးမှူး ဘရိုင်ယန် ဂျိုးဇက် (Brian Joseph) တို့က ပါဝင် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
လွှတ်တော်သဘာပတိဟောင်း (Nancy Pelosi) ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ကမ္ဘာကြီးက မေ့မထားခဲ့ပါဘူးလို့ ပြောသွားပါတယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့ အနီးဝန်းကျင် မြန်မာအများစုနေထိုင်တဲ့ ရပ်ကွက်တွေမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်း အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက် ဒီကနေ့မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံသား ၅၀၀ လောက်ကို ရဲက ၀င်ရောက် ဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရသူတွေဟာ အခု ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှု ခံယူနေကြရဆဲ ဖြစ်သလို အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်ပွားတဲ့ရပ်ကွက်တွေက မြန်မာတွေဟာလည်း ကိုယ့်အိမ်ကိုယ် မပြန်ရဲကြပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က တင်ပြပေးပါမယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့ပြင်က မြန်မာအများစုအလုပ်လုပ်တဲ့ ဈေးတွေမှာ မလေးရှားရဲတွေက ဒီကနေ့ တွေ့သမျှ မြန်မာတွေကို လိုက်လံ ဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ ကပ်ပုံး (၇) ရက်သားသမီး နာရေးကူညီမှုအသင်းက တာဝန်ရှိသူ ကိုဆန်းဝင်းက ပြောပါတယ်။
“ဒီနေ့မနက် ၁၁ နာရီလောက်မှာ မြို့လယ်ခေါင်ကို ရဲကားကြီးတွေ ရောက်ချလာတယ်။ မြန်မာဆုိုင်ကို အတင်းတက်ဖမ်းတယ်။ စားသောက်တဲ့သူတွေကိုရော၊ ပါမစ်ရှိရှိ - မရှိရှိ၊ အကုန်အဖမ်းခံရတယ်။ အားလုံးပေါင်း လူ ၅၀၀ လောက်ရှိတယ် အဖမ်းခံထားရတာ။ အဓိကတာဝန်ယူ ချုပ်ထားတာ ဂျင်ဇန်းရဲစခန်းပါ။ တွေ့သမျှလူ အကုန်လျှောက်ဖမ်းနေတာ။ ဘာမှမေးမြန်းမှုလဲ မရှိဘဲနဲ့။”
လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်း ဒီဒေသမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားအချင်းချင်း ရိုက်နှက် သတ်ဖြတ်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် မလေးရှားရဲက အခုလို လိုက်လံ ဖမ်းဆီးမှုတွေ ပြုလုပ်လာတာပါ။
အဲဒီ ဖမ်းထားတဲ့သူတွေထဲက တရားဝင်နေထိုင်ခွင့် အထောက်အထားရှိသူတွေကို ရဲက နောက်ပိုင်းမှာ ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တာကြောင့် ဒီလူတွေကို လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေနဲ့ ဖမ်းဆီးသဘော သက်ရောက်နေတဲ့အကြောင်း ကွာလာလမ်ပူမြို့က မြန်မာ - မူဆလင် နာရေးကူညီမှုအသင်းက တာဝန်ရှိသူ ကိုအောင်မြင့်က ပြောပါတယ်။
“ဗမာပြည်သားမှန်ရင် အကုန်လုံးကို ဖမ်းတယ်။ ဘယ်လူမျိုး၊ ဘာသာ မခွဲခြားဘူး။ အားလုံးကို ဖမ်းပြီးတော့ ခေါ်သွားတယ်။ စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားရှိတဲ့သူတွေကိုတော့ နိုင်ငံတော် ဥပဒေအရ အကုန်လုံးကို ပြန်လွှတ်ပေးတယ် အကို။ သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့ သူတို့က အကုန်လုံးကို ထိရောက်စွာ အရေးယူမယ်။ အကုန်လုံးကို လိုက်ဖမ်းတယ်။ အစိုးရက တရားဝင်ကြေညာတာ။”
အကြမ်းဖက် ရိုက်နှက်ခံခဲ့ရသူတွေထဲက တချို့ကတော့ အခုချိန်ထိ ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှု ခံယူနေကြရဆဲဖြစ်ပြီး တချို့လည်း သွားစရာ နေစရာ မရှိတဲ့ အခက်အခဲမျိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြရတာပါ။
မေလ ၃၁ ရက်နေ့မှာ လူတစုက ဓါးနဲ့ ၀ိုင်းခုတ်တာ ခံခဲ့ရပြီး ဆေးရုံးမှာ ဆေးကုသမှု ခံယူနေတဲ့ ကိုကိုမောင်ဆိုသူကတော့ သူ့အတွေ့အကြုံကို အခုလို ရှင်းပြပါတယ်။
“၃ - ၄ ယောက်တက်လာတယ်။ နောက်တခါ ၄ - ၅ ယောက် ထပ်တက်လာတယ်။ ကျနော့်ကို သူတို့ လာပြီးတော့ သူတို့ တခါတည်း ခေါ်ချသွားတယ်။ ပြန်လွှတ်တော့ဘူး။ အောက်ကို ဆွဲချသွားတော့ မင်းက ဘာလဲလို့ မေးတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာလို့။ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင် အသေသတ်မယ်တဲ့။ ကျနော် ကရင်ပါ။ ခရစ်ယာန်ပါလို့ ပြောတော့ ခရစ်ယာန်လည်း သတ်မယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာလည်း သတ်မယ် အကုန်လုံးကို သတ်မယ်တဲ့။ ကျနော့် လက်နှစ်ဘက်၊ ပါးတခြမ်းပေါ့ နားရွက်တဘက်ကတော့ သွားလိုက်တယ်ပေါ့။ နားရွက်တဘက် ပါသွားတာပေါ့။ နားရွက်တဘက် လုံးဝကို ပျက်စီးသွားတယ်။ ဒီကောင်တွေက ဘင်္ဂါလီ မူဆလင် ၈ ယောက်လောက်ပါတယ်။ ရခိုင် မူဆလင်က ၂ ကောင်လောက်ပါတယ်။ သံရုံးကလည်း ဘာမှ မလုပ်ပေးဘူး။ အခုကျတော့ နာရေးကူညီမှု အသင်းကလည်း ကျနော့်ကို လာလာပြီး ပြောနေတဲ့အခါကျတော့ ကျနော်ကလည်း ဒီမှာ နေလို့မရတော့ဘူး။ နောက်ဆုံးကျ ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုပဲ ပြေးရတော့တာပေါ့။ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို အကူအညီတောင်းပြီးလို့ တကယ်လို့ အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် ကျနော် သံရုံးကို သွားကြည့်မယ်။ မနက်ဖြန် သွားရင်လည်း သွားကြည့်မယ်။”
ခိုကိုးရာမဲ့နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အတော်များများဟာ ကပ်ပုံး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ ဆက်လက် ခိုလှုံနေကြဆဲပဲလို့ ကပ်ပုံးကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦးဣိန္ဒကက ဗွီအိုအေကို ရှင်းပြပါတယ်။
“ကျောင်းထဲမှာ အရင်တုန်းက အတိုင်းပဲ ၂၀ နဲ့ ၃၀ ကြားမှာ များတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းဆိုတော့ မိန်းကလေးတွေ လက်မခံတော့ မိန်းကလေးတွေကိုတော့ နီးစပ်ရာ အိမ်ကို ပို့ထားတယ်ပေါ့နော်။ စားချိန်ကျရင်တော့ ဒီကျောင်းကို လာလာစားကြတယ်။ ဦးဇင်းကိုတော့ သူတို့ အကြံပေးထားတာက တချို့လည်း ပြန်ကြမယ်။ တချို့လည်းပဲ အရင် အေးဂျင့်ပေါ့လေ အလုပ်အပ်ထားတဲ့ အေးဂျင့်တွေနဲ့ တခြားနေရာကို ပြောင်းပြီး အလုပ်လုပ်မယ်ပြောတယ်။ အရင်နေရာတော့ အလုပ်မလုပ်ရဲတော့ဘူးပေါ့။ မပြန်ရဲတော့ဘူးပေါ့။ အရင်နေရာက ပြဿနာရှိတဲ့ နေရာမို့လို့။ မူဆလင်တွေ များတဲ့အခါကျတော့လေ။ မြန်မာမူဆလင်တွေ။”
အခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ မလေးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးက မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ် တစုံတရာ လုပ်ဆောင်ပေးနေခြင်း ရှိမရှိဆိုတာကို သိနိုင်ဖို့ သံရုံးကို ဗွီအိုအေက ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ဆက်သွယ်လို့ မရခဲ့ပါဘူး။
ဒီကနေ့တော့ မလေးရှားရဲက မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို လိုက်လံ ဖမ်းဆီးတာကလွဲလို့ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေမရှိဘူးလို့ ဒီကိစ္စတွေကို အနီးကပ် စောင့်ကြည့်နေသူတွေက ပြောပါတယ်။
အကြမ်းဖက်မှုတွေမှာ တာဝန်ရှိသူကို ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားခြင်း ရှိမရှိဆိုတာကိုတော့ မလေးရှားအာဏာပိုင်တွေက သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသေးသလို ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေ ဘယ်လို စတင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်း အခုချိန်ထိ အတိအကျ ပြောနိုင်သူ မရှိသေးပါဘူး။
ဇွန် (၆) မြင်ကွင်း ရင်တွင်းမှတ်တမ်း (သမိုင်းချည်စက်လူသတ်ပွဲ)
by ဂါ မဏိ (Notes) on Wednesday, June 5, 2013 at 12:50pm
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ပြောသော မြေနီကုန်း အရေးအခင်းပထမအကြိမ် နှစ်ပတ်လည်အကြောင်း
Kyaw Naing's photo.
မြန်မာ့အသံမှာလည်း မြေနီကုန်းကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပါလာတဲ့ကိစ္စကိုလည်း ကျမရှင်းပါရစေဦး။ မြေနီကုန်းမှာပေါ့လေ။ အဲဒီလို မြန်မာ့အသံကပြောသလို လုပ်သားပြည်သူ့နေ့စဉ်က ရေးသလိုတော့ ကျမ ကဗျာဆန်ဆန်၊ ဝတ္ထုဆန်ဆန်လေးတော့ မပြောတတ်ပါဖူး။ ကားကလေးတစ်စီးက လာတယ်ပေါ့လေ။ အရောင်လေးကလည်း ဘယ်လိုလဲမသိပါဖူး။ နံပါတ်ကလည်း ဘယ်လိုလဲမသိပါဖူး။ ကားကလေးက တစ်ခါထဲ တံခါးပွင့်သွားတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ဆင်းလာတယ်။ ဆင်းလာတဲ့အခါကျတော့ ပန်းချသွားတယ်။ ပန်းချသွားပြီးတော့ ဒီအမျိုးသမီးကို မဝတရုံးရောက်မှ ကျမမှန်းသိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ဒီကိစ္စဟာလည်းကျမပြန်ပြီးတော့ ရှင်းပြရမယ်။ ဒီအတိုင်းဖြစ်တာလဲ မဟုတ်ပါဖူး။ အဲဒီနေ့ စမ်းချောင်းမှာ ကျမတို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ (၂၁)ရက်နေ့ ဇွန်လအရေးအခင်း တစ်နှစ်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီအခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ သြော်..အဲဒီအခမ်းအနားမှာလည်း လူက ကျမတုိ့မြင်သလောက်တော့ နှစ်ထောင်၊ သုံးထောင်လောက်ရှိတယ်လို့ မြင်ပါတယ်. ဒါပေမဲ့ မြန်မာ့အသံကတော့ ငါးရာလောက်ပဲမြင်တယ်လို့ ဆိုတယ်။
ကျမတို့ အမြင်ချင်းကတော့ သိပ်မတူဘူးပေါ့လေ။ ကျမတို့ ဒီရုံးကနေ ပြန်လာတော့၊ ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ (တိပ်ခွေကြားထဲမှာ ပြတ်သွား) ရောက်လာပြီးတော့ ပန်းစည်းလေးချတယ်။ ပန်းစည်းလေးချပြီးတော့ အလေးပြုတယ်။ သိပ်လည်းမများပါဖူး။ ၁၅ယောက်လောက်ပါ။ ကျမတို့မှာ ဓာတ်ပုံတွေရှိပါတယ် ကြည့်ချင်လို့ရှိရင်။ ၁၅ယောက်လောက်ပဲ။ အားလုံးအေးအေးဆေးဆေးပဲ ဘာမှ ရုတ်ရုတ်ရက်ရက်လည်းမရှိဖူး။ ဒါပေမဲ့ ကျမတို့ ဖြတ်လည်းသွားတဲ့ အချိန်မှာ ဘာလဲ။ ဟိုလက်နက်ကိုင်တပ်တွေက လာပြီးတော့ ပြေးပြီးတော့ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းပဲ ဒီကျောင်းသားတွေကို ဖမ်းတာ၊ ဆွဲတာ ကျမတို့တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ကျမပြောတယ်။ ပြန်းသွားမယ်။ ဒီလိုကျောင်းသားတွေကို ဖမ်းတာဆီးတာ ကျမတို့လျစ်လျှူရှုထားလို့ မဖြစ်ပါဖူး။ ကျမတို့ကျောင်းသားမဟုတ်ပါဖူး။ ဒါ တစ်ခြားတပ်ဦးတစ်ခုလို့ ကျမတို့နားလည်ပါတယ်။ ကျမတို့ အဖွဲ.ချုပ်ဝင်များမဟုတ်ပါဖူး။ ဒါပေမဲ့ ကျမတို့ အဖွဲ့ချုပ်ဝင်များ မဟုတ်လို့ လျစ်လျှူရှုထားလို့ရှိရင် နဝတ က ကျမတို့ကို ပါတီနိုင်ငံရေးပဲလုပ်တယ်။ အမျိုးသားနိုင်ငံရေး မလုပ်ဖူးဆိုတာ ပြောမှာကိုလည်း စိုးရသေးတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကိုယ့်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သား အချင်းချင်းပဲ။ ကျမအနေနဲ့ ဒီလိုတော့ လျစ်လျှူရှုထားလို့မရဖူးဆိုပြီး ကျမ ပန်းစည်း တစ်ခုယူသွားပြီးတော့ ပြန်ပြီးတော့ချပါတယ်။ ချလာတဲ့အခါကျတော့ ကျမတို့နဲ့ ပါလာတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ကို ဖမ်းသွားတယ်။ ကျမ ဘာမှ မလုပ်ပါဖူး။ ဖမ်းရင်လည်း ဖမ်းသွားပေ့ါ။ ကျမ ကားထဲဝင်ပြီးတော့ ဆက်ပြီးတော့ ထွက်သွားတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ သေနတ်တွေနဲ့ ပစ်တယ်။ အောက်က၊ အနောက်ကနေ သေနတ်ဖောက်သံတွေ ကြားတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ကျမပြောတယ်။ ပြန်လှည့်ရမယ်။ ဒီလို သေနတ်ဖောက်လို့ ကျမတို့ဟာ ဆက်ပြီးထွက်သွားတယ်ဆိုရင် မသင့်တော်ဖူး။
ဒီဟာဟာ သေနတ်ဖောက်တာဟာ ပြည်သူလူထုကို ခြိမ်းခြောက်နေတာပဲ။ ပြည်သူလူထုက်ု ခြိမ်းခြောက်နေတာကို ကျမကနေပြီးတော့ ဥပက္ခောပြုပြီးတော့ ပစ်သွားတယ်ဆိုတာ မသင့်တော်ဖူး ဆိုပြီး ကျမပြန်ပြီးလှည့်လာပါတယ်။ သေနတ်ပစ်တဲ့နေရာကို ပြန်ပြီးတော့ လှည့်ခဲ့တယ်။ လှည့်တဲ့အခါ အူယားဖားယားနဲ့ ရဲအရာရှိတစ်ယောက်က ”ဘာလဲ၊ မောင်းမပြေးနဲ့ ပစ်မယ်၊” ဟာ ဘယ်သူက မောင်းပြေးနေလို့လဲ။ တမင်သက်သက် ပြန်လာတာ။ မောင်းပြေးဖို့ မဟုတ်ပါဖူးဆိုတာ။ ဒါကိုလည်း သူက ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း စကားမရှည်နဲ့ပေါ့လေ။ ပစ်မယ်။ ခတ်မယ်နဲ့။ သေနတ်ကြီးကလည်း တရမ်းရမ်းနဲ့လုပ်နေပါတယ်။ ကျမတို့ကို စခန်းရှေ့မှာ ရပ်ဆိုပြီး ကျမတို့ စခန်းရှေ့မှာ ရပ်တယ်။ စခန်းရှေ့မှာ ရပ်ပြီးတဲ့ အခါကျတော့ ကျမတို့ကို TE11 ကြီးပေါ်မှာတက်ခိုင်းပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ကျမတို့အားလုံး အတူတူတက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ ကျမဘယ်သူလဲဆိုတာ ဘေးက အရာရှိတစ်ဦးက ကောင်းကောင်းသိတယ်လို့ ကျမထင်ပါတယ်။
ဒီမတိုင်ခင်မှာဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖမ်းဆိုပြီး အရာရှိတစ်ဦးက အော်နေတာကြားတော့ ကျမ ဘယ်လိုလူမှန်းသိတယ်ဆိုတာ သိပ်ပြီးတော့ ထင်ရှားတယ်။ ဒါပေမဲ့ အများက မသိဖူးဆိုလို့ရှိရင် ကျမလက်ခံပါတယ်။ ကျမကို လူတိုင်းက သိတယ်လို့ ထင်နေလို့ရှိရင် တော်ကြာ ကျမ သွေးကြီးရာရောက်ဦးမယ်။ မသိလို့ပဲပေါ့။ ကျမတို့ကို TE11 ပေါ်မှာ တက်ဆိုတာ၊ တက်ပါတယ်။ တက်ပြီးတော့ ဗိုလ်မှူးကြီးကိုယ်တိုင် ရောက်လာပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးကြီးကတော့ အင်မတန်မှ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး လူကြီးပီပီသသရှိပါတယ်။ ကျမတို့ ဒါမှန်တာကို မှန်တဲ့ အတိုင်းပြောမှာပါ။ ကျမသက်သက်မဲ့ နဝတမို့လို့ တပ်မတော်အရာရှိမို့လို့ စော်ကားချင်တဲ့ စိတ် လုံးလုံးမရှိပါဖူး။ ကျမတို့ကို မဝတ ရုံးခေါ်သွားတယ်။
မဝတရုံးရောက်တဲ့ အခါကျတော့ ကျမတို့အားလုံး ထိုင်ပြီးတော့ ဆွေးနွေးကြတာပေါ့လေ။ ဆွေးနွေးကြတဲ့ အခါကျတော့ ကျမပြောပါတယ်။ ဒီ ၂/၈၈ ကိုတော့ လိုက်နာလို့ မဖြစ်ပါဖူး။ လူငါးယောက်နဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်ဖို့ဆိုတာကတော့ မဖြစ်ပါဖူး။ ကျမတို့ဟာ ဘာမှ ဆူဆူပူပူလည်း လုပ်မှာ မဟုတ်ပါဖူး။ အေးအေးချမ်းချမ်းပဲ လုပ်သွားမှာ ပါဆိုပြီးတော့ ကျမပြောသွားပါတယ်။ ဒီအာဏာဖီဆန်ရေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောသွားပါတယ်။ ပြီးတော့ မြေနီကုန်းမှာ ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်းကျောင်းသားလေးတွေကို ဖမ်းလို့ ကျမပြန်လာရတာပါဆိုပြီး ကျမရှင်းပြသွားပါတယ်။ ဒီဟာတွေအားလုံးကျမ ရှင်းပြသွားပြီးသားပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒါတွေအားလုံးမြန်မာ့အသံကလည်းမရှင်းပြသွားပါဖူး။
ဒီတော့ဒီကိစ္စမှလည်း ကျမဟာ တမင်ဆူပူအောင် လှုံ့ဆော်ချင်လို့ ပန်းစည်းသွားချတယ်ဆိုတာ ကျမဟာ ဆူပူအောင် လှုံ့ဆော်ချင်လို့မဟုတ်ပါဖူး။ ဒီကျောင်းသားလေးတွေကို ကျမမျက်စိရှေ့မှာ ဖမ်းသွားတာမြင်လို့ပါ။ ကျောင်းသူလေး တစ်ယောက်လည်းပါသွားပါတယ်။ ဒီကလေးများဟာ အေးအေးဆေးဆေးပန်းစည်းချပြီးတော့ ပြေးဖို့ အဆင်သင့်ပဲ။ ပြေးရင်လည်း ပြေးပါစေပေါ့။ မသိချင်ယောင်ဆောင် လို့ရှိရင် ဒီကိစ္စဟာ ပြီးသွားမယ့်ကိစ္စပဲ။ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့အားလုံးပြီးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ မြေနီကုန်းမှာ လူတစ်ယောက် ကျဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စနဲ့လည်း ကျမပြောချင်ပါတယ်။ ဒီလူဟာ အလုပ်သမားသွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီက စည်းရုံးရေးတာဝန်ခံတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလူကျသွားတဲ့အခါကျတော့ သွားပြီးတော့ ကောက်တာ၊ သွားပြီးတော့ ကယ်တာဟာ ကျောင်းသားများပါ။ ကျောင်းသားလေးများဟာ ဒီလူကျသွားတဲ့ ဦးသိန်းမိုးကို ဘုန်းကြီးကျောင်းကို သယ်သွားတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းက သံဃာတော်များဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီတော့ ကျမတို့ ကျောင်းသားများ၊ ရဟန်းရှင်လူပြည်သူလူထုများဟာ ဆူပူချင်တဲ့လူထုမဟုတ်ဘူး။ သတ်ဖြတ်ချင်တဲ့လူထုမဟုတ်ဘူး။ တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် ကြင်နာတဲ့လူထုဆိုတာ အင်မတန်မှ ထင်ရှားပါတယ်။ ဦးသိန်းမိုး ဟာ အလုပ်သမားသွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီထဲက စည်းရုံးရေးတာဝန်ခံဆိုတာ သွားပြီးတော့ ကောက်တဲ့ကျောင်းသားလေးတွေ သိပါတယ်။ ဒီကျောင်းသားလေးတွေ သွားပြီးကောက်တဲ့ အခါတုန်းက သူ အသက်မထွက်သေးပါဘူး။ သူဘယ်သူဆိုတာ သူပြောနိုင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ကဒ်ပြားတွေလည်း ကျောင်းသားတွေက တွေ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ငါတို့ရန်သူကြီးဆိုပြီးတော့ မပစ်ထားပါဘူး။ ကျောင်းသားလေးများက သယ်သွားပါတယ်။ ဆေးရုံအရောက် လိုက်ပို့ပေးဖို့စီစဉ်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ကျမတို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ အင်အားစုတွေကို ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်တောင်မှ တိုက်ခိုက်နေလဲ။ ကျမတို့ဟာ ဆူပူအောင်လုပ်ချင်တဲ့လူတွေ၊ အကြမ်းဖက်ချင်တဲ့လူတွေ ဆိုလို့ရှိရင် ဦးသိန်းမိုးကြီးကို တစညကြီးဟဲ့ ဆိုပြီးပစ်ထားခဲ့မှာပေါ့။ ဒီလိုစိတ်တွေ မရှိပါဘူး။ ကျမတို့ ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းပဲ။ ကျမတို့စိတ်မကောင်းပါဖူး။ ဦးသိန်းမိုးတစ်ယောက်ကျသွားတယ်။ ဦးသိန်းမိုးဆိုတာဟာ တစညတို့၊ အလုပ်သမားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီတို့ဆိုတာ ကျမတို့စိတ်ထဲမှာ မထားပါဘူး။ ပြည်သူထဲက တစ်ယောက်ကျသွားတယ်။ ဒီလောက်တောင်မှ ကျမတို့မှာ အသက်လုံခြုံမှု မရှိဘူးလား။ ဒီလိုအခြေခံလူ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အသက်လုံခြုံမှု ကျမတို့ မရှိနိုင်ဘူးလား။ ဒီလိုလူ့အခွင့်အရေးတွေလိုချင်လို့ ကျမတို့ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုထဲမှာ ပါဝင်နေတာပဲ။ ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ကျမတို့ ဆက်ပြီးတော့ လုပ်သွားမှာပဲ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျမတို့ မတရားတဲ့ အမိန့်အာဏာ ဖီဆန်တယ်ဆိုတာ၊ ဒီလို မတရားတဲ့ အမိန့်အာဏာတွေကို မဖီဆန်လို့ရှိလို့ရှိရင် တဖြေးဖြေး ကျမတို့မှာ ရှိစုမဲ့စု အခွင့်အရေးလေးတွေတောင်မှ ပျောက်သွားချည်ရဲ့ ဆိုပြီးတော့ ယုံကြည်လို့ ဖီဆန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါက်တာအောင်ခင်တည်းဖြတ်သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှလွတ်ကင်းရေးနှင့်အခြားစာတမ်း စာအုပ်အပိုင်း(ခ)- "သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အမှတ်-၆' မှထုတ်နုတ်ဖော်ပြပါသည်။
မြန်မာများ အသတ်ခံရမှု မလေးရှား သံအမတ်ကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန သတိပေး
မြန်မာများ အသတ်ခံရမှု မလေးရှား သံအမတ်ကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန သတိပေးမလေးရှား နိုင်ငံတွင် မြန်မာနိုင်ငံ သားများ အကြမ်းဖက် ခံရမှုများ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွား နေခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဦးဇင်ယော်က မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ မလေးရှား နိုင်ငံ သံအမတ်ကို ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့တွင် သတိထောက်လွှာ ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်သည်။
မလေးရှားရောက် မြန်မာများ ပြီးခဲ့သော ရက်ပိုင်းက ဆက်တိုက် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက် ခံရသဖြင့် အသက် သေဆုံးမှုနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှုတို့ကို ချက်ချင်း စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီး ပြစ်မှု ကျူးလွန် သူများကို ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူ ပေးရန်၊ ယင်းကဲ့သို့ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများ ထပ်မံ မဖြစ်ပွားအောင် မလေးရှားအစိုးရက လုပ်ဆောင်ပေးရန် သတိပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ယင်းထုတ်ပြန် ချက်တွင် ဖော်ပြ ပါရှိသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ် ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံ သားများ၏ လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မလေးရှားနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနကို ယနေ့ သွားရောက် တွေ့ဆုံမည် ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ်က ပြောကြားသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံ ဆာလာယန်းနှင့် အန်းပန်းရွာသစ် တို့တွင် ပြီးခဲ့သော ရက်ပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အုပ်စုလိုက်ဝင်ရောက် အကြမ်းဖက်မှု များကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသား သုံးဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ၁၂ ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည်။ မလေးရှား နိုင်ငံတွင် တရားဝင် မြန်မာ အလုပ်သမား သုံးသိန်းကျော် ရှိပြီး တရားမဝင် မြန်မာလုပ်သား လေးသောင်းကျော် ရှိကြောင်း မလေးရှား နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး၏ အဆိုအရ သိရှိရသည်။
မလေးရှားမှာ အဖမ်းအဆီး အရမ်းကြမ်းနေတယ်.... တရားဝင်ရော တရားမဝင်ရော.. တွေ့သမျှ မြန်မာ အကုန်ဖမ်းတာ....
ယခုလက်ရှိ ကွာလာလမ်ပူ မြန်မာဆိုင်များတည်ရှိရာ လမ်းများအားလုံး
ပိတ်ဆို့စစ်ဆေးမှု့ (အော်ပရာစီ) စတင်ပြုလုပ်နေပြီ ယနေ့ 5.6.2013 နံနက် 11 နာရီမှ စတင်ပြီး ကွာလာလမ်ပူမြို့မြန်မာစားသောက်ဆိုင်များ
တည်ရှိရာ အနီးတစ်ဝိုက် ရှိ လမ်းများအားလုံး ၊ မြန်မာဆိုင်များ ၊ လမ်းထောင့်များတွင် အင်အားရာကျော်ရှိသော ရဲ ၊ လဝက ၊ ရေးလား
(ပြည်သူ့စစ်)များပါဝင်သည့် အထူးစီမံချက်တစ်ရပ်ပြုလုပ်ကာ မည်သူ့ကို
မဆို စစ်ဆေးဖမ်းစီးမှု့စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့4ရက်ဆက်တိုင် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ကြားတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု့များ ကြောင့် ယနေ့ကွာလာလမ်ပူတစ်ဝိုက်
Block Checking များ ၊ နေအိမ်များသို့ ရှောင်တခင် စစ်ဆေးမှု့များ နှင့်
ဖြင့် ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှု့များ ပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ ဖမ်းဆီးသည့် အဖွဲ့တွင်ပါဝင်သော ရေးလားမှ ပြောပြခဲ့တာ သိရပါတယ် ။
သို့ပါသောကြောင့် ယနေ့ 5.6.2013 ညနေပိုင်း အဖမ်းဆီးများရှင်းလင်း
သည်အထိ အထောက်အထားမရှိသော မြန်မာနိုင်ငံသားများ ကွာလာလမ်ပူ
မြို့သို့ သွားလာမှုဆင်ခြင်ရန် သတိပေးရပါတယ် ။ ယခု ချိန်အထိ Mydin
ဒေါင့် ၊ ကိုတာယာရာ ထောင့် ၊ ဂျလန်းစီလန်း ၊ ဂျလန်းလီပို့ပူဒူး စသည့်
မြန်မာဆိုင်များတည်ရှိရာလမ်းများ နှင့် မြန်မာဆိုင်တိုင်းစီ တစ်ဆိုင်ဝင် တစ်ဆိုင်ထွက် စစ်ဆေးဖမ်းဆီးနေကြောင်း မလေးရှားရောက် မြန်မာ တို့အား အချိန်မှီ သတိပေးရပါသည် ။
r ခင်ဦးသာ| June 5, 2013 | ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးမြို့နယ်ရှိ ပရိန်ကျေးရွာသားများနှင့် ထိုဒေသ၌ လုံခြုံရေး တာဝန်ယူထားသော တပ်ဖွဲ့ဝင်များ အကြား ပဋိပက္ခ ဖြစ်ကြပြီး ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားရာ အမျိုးသမီး ၃ ဦး သေဆုံးကြောင်း သိရသည်။ ပရိန်ရွာ ဘင်္ဂါလီ(မွတ်စလင်)ဒုက္ခသည်စခန်းမှ ဒုက္ခသည်တချို့သည် အာဏာပိုင်များ တည်ဆောက်ပေးမည့် နေအိမ်တန်းလျားများ၌ နေထိုင်ရန် ငြင်းဆန်သည့်အပြင် အုပ်စုဖွဲ့ တိုက်ခိုက်ရန်မူသည့်အတွက် လုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားသည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ခြောက် လှန့် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မြောက်ဦး ရဲစခန်းမှ စခန်းမှူး ရဲအုပ် မောင်မောင်မြ က ဧရာဝတီ ကို ပြောသည်။ “အိမ်ဆောက်ပေးဖို့ ပစ္စည်း သယ်လာသူတွေ၊ လုံခြုံရေးတွေကို တုတ်တွေ၊ ဓားတွေနဲ့ လူအုပ်စုလိုက် တိုက်ခိုက်ရန်ပြုတော့ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင် တချို့ထိခိုက်သွားတဲ့အပြင် အသက်အန္တရာယ်ကိုပါ စိုးရိမ်လာတော့ ခုခံကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ခြောက်လှန့် ပစ်ခတ်မှု ဖြစ် တယ်၊ ၃ ဦး သေတယ်၊ ၃ ဦးလောက် ဒဏ်ရာ ရတယ်ကြားတယ်”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ သေဆုံးသူများမှာ အမျိုးသမီးများ ဖြစ်ကြောင်း AP သတင်းဌာနက ဖော်ပြသည်။ ပြည်နယ်အစိုးရနှင့်သက်ဆိုင်ရာ ဒေသ အာဏာာပိုင်များသည် ပရိန်ကျေးရွာရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းမှ ဒုက္ခသည်များအား မိုးမကျမီ အမိုး အကာအောက် ရောက်ရှိရေး အတွက်ဟုဆိုကာ နေအိမ်တန်းလျားများ ဆောက်ပေးနေကြောင်း မြောက်ဦး စခန်းမှူး က ပြောသည်။ သို့သော် ဒုက္ခသည်များကမူ ၎င်းတို့မြေကွက်များ ဆုံးရှုံးသွားမည်ကို စိုးရိမ်သည့်အတွက် ထိုမြေ၌သာ ဆောက်လုပ် နေထိုင်မည်ဟု ငြင်းဆန်ကြကြောင်း၊ အာဏာပိုင်များကလည်း စီစဉ်ပေးသည့် နေရာ၌သာ နေထိုင်ရန် ပြောဆိုရာမှ အငြင်းပွား ရုန်းရင်း ဆန်ခတ်ဖြစ်၍ ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ပရိန်ကျေးရွာနှင့် ယိုင်သေကျေးရွာတို့၌ ဒေသခံ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနှင့် ဘင်္ဂါလီတို့ အကြား ၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခများကြောင့် နှစ်ဘက်စလုံး၌ ရာချီ၍ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်သွားခဲ့ကြသည်။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနေထိုင်သည့် ပုရိန်ကုန်းရွာနှင့်ယိုင်သေရွာမှ ဒုက္ခသည်များသည် မြောက်ဦးမြို့ပေါ်ရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တချို့တွင် ခိုလှုံနေဆဲ ဖြစ်ပြီး ပရိန်နှင့်ယိုင်သေရွာမှ ဘင်္ဂါလီ ဒုက္ခသည်များကို ၎င်းတို့ရွာ အနီး၌ ဒုက္ခသည်စခန်း တန်းလျား တည်ဆောက်ထားပေးကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။ ဘင်္ဂါလီ ပရိန်ကျေးရွာသည် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ နေထိုင်သော ပုရိန်ကုန်း ကျေးရွာ၏ တဘက်ကမ်း ဖြစ်သည်။ ထိုကျေးရွာ ၂ ခု ၌ အောက်တိုဘာလအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခများကြောင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ၇ ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး ဘင်္ဂါ လီတချို့လည်း သေ ဆုံး ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ပရိန်ဒေသ၌ ယခုအခါ လုံခြုံရေး ထူထပ်စွာ ချထားပြီး မြောက်ဦးမြို့ပေါ်၌ တည်ငြိမ်အေးချမ်းနေကြောင်း မြောက်ဦး မြို့ခံများက ပြော သည်။ http://burma.irrawaddy.org/archives/41435
“ယနေ့ နံနက်၁၁ နာရီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးဦးစိုးသိန်းတို့ စကားဝိုင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု”
World Economic Forum on East Asia 2013တွင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ပြည်ထောင်စု
ဦးသန့် မြင့်ဦးနှင့်BBC World News တင်ဆက်သူတို့ ၏
Myanmar: What Future?ဆွေနွေးပွဲတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု
အစီအစဉ်ကိုယနေ့ ဇွန်၆ရက်နေ့ နံနက်၁၁ နာရီမှမွန်းလွဲ၁၂နာရီ၁၄မိနစ်အတွင်း
နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပသည့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်သို...
ကိုမင်းကိုနိုင်ကို ချီးမြှင့်တဲ့ ဒီမိုကရေစီဆုပေးပွ...
ဇွန် (၆) မြင်ကွင်း ရင်တွင်းမှတ်တမ်း (သမိုင်းချည်စက...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ပြောသော မြေနီကုန်း အရေ...
မြန်မာများ အသတ်ခံရမှု မလေးရှား သံအမတ်ကို နိုင်ငံခြာ...
“ယနေ့ နံနက်၁၁ နာရီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ပြည်ထောင်...